OwaseMphithi ne-albhamu entsha | News24
OwaseMphithi ne-albhamu entsha
PHOTO:supplied Joel Zuma
UJOEL Zuma ongumculi, umlingisi kanye nomethuli wezinhlelo kumabonakude wenza ezibukwayo endimeni yezomculo.
UJoel ungowokuzalwa eMpendle kodwa wakhulela kwaMpumuza eMgungundlovu, wafunda wagogoda kwizifundo zeshashalazi eNatal Technikon esiyaziwa ngeDurban University of Technology kanti kumanje uzinze eGoli lapho elandela khona amadlelo aluhlaza.
“Abantu bazongikhumbula kakhulu ngecwecwe lami lokuqala elalithi When the time is right elalinama noni afana Liyajika, Njengawe nelinye elithi Ngimtholile neyaduma kakhulu. Mumva nje ngimatasa ngipheka icwecwe elisha elisihloko sithi The Essence of Love eseliya ngasekupheleni. Nginengoma ephume ekuqaleni kwalenyanga ethi Owami lengoma ikhuluma ngowesilisa osephumelele empilweni,kepha oswele uthando kuyimanje iyezwakala emisakazweni emi ningi. Leli cwecwe elizophuma ngoNhlolanja okuyinyanga yothando futhi nalo lizobe ligcwele amanoni othando nesigqi se Afro-Soul esithakwe nezokholo,” kuchaza uJoel.
UJoel ongomunye babaculi abazonandisa emcimbi waminyaka yonke uMgungundlovu Midmar Dam festival uthe abathandi bomculo bazobhema bakholwe.
“Abantu basekhaya KwaZulu-Natal abangilindele eMidmar Dam, lapho ngizobe nginandisa khona kwiMidmar Music Festival. Ngizobe ngiqhulula amanoni ami akwicwecwe lami elisha nebhendi bukhoma.”
Ecebisa intsha enesifiso sokungena kulendima yezikaqeda isizungu lomculi uthe kufanele ifunde kuqala.
“Engifuna ukucebisa ngakho intsha efuna ukungena ebhonini yezomculo, ukuthi udumo lufika ludlule ngakhoke imfundo ibalulekile. Ungayeki isikole ugijimele udumo, ubude abuphangwa”, kusonga uJoel.